Xog: Kulan u socda Beelwetnta Abgaal iyo Ciidamo kubiiray. – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
by admin 3rd April 2019 044
Kulan ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta, xildhibaanada iyo saraakiisha beesha Abgaal ayaa xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, xilli ay xiisad ka dhex oogan tahay dowladda iyo Senator Xaaji Muuse Suudi Yalaxow.
Xiisaddan ayaa ka dhalatay go’aan kasoo baxay dowladda oo lagu amray in la isaga guuro xerada Mariino ee ciidanka Badda Soomaaliya, oo uu degan yahay Muuse Suudi.
Xaajiga ayaa waxaa dhulkan siiyey dowladdihii hore, isla markaana waxa sida uu sheegay uu haystaa Document ay u saxiixeen Madaxdii hore ee dalka, maadaama horay dowladdii C/llaahi Yuusuf uu ugu wareejiyay hubkiisa, looguna bedelay xarunta uu dgean yahay.
Sida ay ilo-wareedyo sheegeen Kulanka xalay oo aan loo kala harin ayaa lagu go’aamiyey in wafti kale loo diray dowladda looguna sheego in Muuse Suudi uu xaq u leeyahay dhulkan, islamarkaana dowladda ay ka laabato damaceeda ah inay xoog isku daydo.
Kulanka ayaa ka dambeeyey kulan horey u dhex-maray madaxweyne Farmaajo iyo wafti ka socday beesha Abgaal, oo madaxweynaha uu ka codsaday inay Xaajiga qanciyaan.
Waxaa kulanka xalay sidoo kale lagu go’aamiyey in dowladda loo sheego in dhib kasta oo ka dhasha arrintan ay mas’uuliyadeeda qaadi doonaan.
Dhinaca kale, ciidamo badan iyo gawaari dagaal oo tiro badan ayaa ku qul-qulaya halka uu degan yahay Xaaji Muuse, si ay uga difaacaan gardarrada ay sheegeen inay dowladda kusoo maagtay.
Inkasta oo aan la hayn tirada rasmiga ah ee ciidamadan, haddana waxaa la sheegay inay kor u dhaafayaan ilaa shan boqol oo askari. Waxaa ciidankan hoggaaminaya jeneraalo iyo korneylo sare oo caan ah oo sheegay inay Muuse ka difaaci doonaan gar-darrada dowladda.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in dowladda oo markii hore rumeysneyd inay si fudud ku kicin karto Muuse ay hadda garwaaqsatay in xaaladda ay ka adag tahay sidii hore, lagana yaabo inay raadiso xal kale, sida inay tanaasusho ama Muuse lacag malaayin dollar ah ka siiso dhulka.
Somaliland: Ganacsade loo gacan galinaayo Dowlada Jabuuti iyo dood kataagan.
Isbedal Ballaaran Oo Lagu Sameeyay Xisbiga DDSI.
Degmada ceelcade ee gobolka gedo waxaa ka jirta horumar balaaran oo la taaban karo oo ay ka gaartay dhanka waxbarashada
admin 18th September 2015 18th September 2015
Furriinkii Ugu Dhakhsiyaha Badnaa 2019.. Waxaa La Kala Tagay Markii La Isqabay 3 Daqiiqo oo Qura (Muuqaal)
Mohamed Abdirashid Abaajo 10th February 2019